Boko Haram oo laga mamnuucay Nigeria - BBC Somali - Warar
Boko Haram oo laga mamnuucay Nigeria
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 June, 2013, 08:28 GMT 11:28 SGA
Hoggaamiyaha Boko Haram Abubakar Shekau
Dowladda Nigeria waxay mamnuucid rasmi ah ku soo rogtay kooxda Islaamiga ah ee Boko Haram, oo ay ku sheegtay inay tahay urur aragixiso. Qaanuunka cusub ee kooxdan lagu mamnuucayo waxaa kaloo uu qabanayaa kooxda Ansaaru al-Diin - oo la tuhunsan yahay inay ka farcantay Boko Haram.
Amarka mamnuucidda waxaa soo saaray madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan. waxaa uu macnuhu yahay in cid kasta oo taageerta hawlaha labadaasi kooxood ay muteysanayso xabsi ugu yaraan 20 sano.
Maalintii Isniinta, Maraykanku waxaa uu ku yaboohay abaalgud gaaraya ilaa toddoba milyan dollar ciddii gacan ka geysata soo qabashada hoggaamiyaha Boko Haram, Abubakar Shekau.